Nitifitra ny polisy nandritra ny korontana manohitra ny fanakatonana tao Rotterdam, 7 naratra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany mikasika ny Netherlands » Nitifitra ny polisy nandritra ny korontana manohitra ny fanakatonana tao Rotterdam, 7 naratra
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao farany mikasika ny Netherlands • Vaovao • People • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
7 no naratra rehefa nitifitra ny polisy nandritra ny korontana manohitra ny fanakatonana tao Rotterdam.
Namoaka didy maika mandràra ny olona tsy hivory ao amin'ilay faritra “hitandrina ny filaminam-bahoaka” ny manampahefana Rotterdam, raha nakatona kosa ny gara lehibe ao aminy.
Olona fito no naratra rehefa nisy fihetsiketsehana manohitra ny Pays-Bas' Nivadika ho korontana mahery vaika tao afovoan-tanàna ny fameperana COVID-19 vao nampidirina Rotterdam, nanery ireo mpitandro filaminana nitifitra ireo mpanao fihetsiketsehana.
Raha nihazakazaka nanerana ny distrikan'ny fivarotana afovoan-tanànan'ny seranan-tsambo ireo mpanakorontana, nandoro sy nitora-bato sy afomanga tamin'ireo manamboninahitra, izay nantsoin'ny ben'ny tanànan'i Holandy hoe “fihetseham-po mahery vaika”.
RotterdamNy ben'ny tanànan'i Ahmed Aboutaleb dia nilaza tamin'ny marainan'ny asabotsy fa “imbetsaka ny polisy no nahatsapa fa ilaina ny maka ny fitaovam-piadiany hiarovany tena”.
“Nitifitra mpanao fihetsiketsehana [ny polisy], naratra ny olona,” hoy i Aboutaleb. Tsy nanana antsipiriany momba ny ratra izy. Nanao tifitra fampitandremana ihany koa ny polisy.
Nilaza ny polisy tao anatin'ny fanambarana iray fa “niteraka korontana ny fihetsiketsehana nanomboka teo amin'ny araben'i Coolsingel. Toerana maromaro no nirehitra. Nalefa ny afomanga ary nanao tifitra fampitandremana maromaro ny polisy”.
“Misy ny naratra vokatry ny tifitra variraraka”, hoy ihany ny polisy.
Polisy maromaro ihany koa no naratra tamin'ny herisetra ary olona am-polony no nosamborin'ny polisy ary manantena ny hisambotra bebe kokoa rehefa avy nandinika ny horonan-tsary avy amin'ny fakantsary fiarovana, hoy i Aboutaleb.
Nilamina ihany ny toe-draharaha taorian’izay, saingy nisy polisy mavesatra.
Nilaza ny polisy holandey fa nisy vondrona avy amin'ny firenena rehetra nentina mba "hamerina ny filaminana" ao an-tanàna.
Nisy fihetsiketsehana nokasaina hatao androany tao Amsterdam hanoherana ny sisin'ny COVID-19 dia nofoanana taorian'ny korontana tao Rotterdam.
Io no iray amin'ireo fipoahan'ny herisetra ratsy indrindra tao amin'ny firenena Pays-Bas hatramin'ny nisian'ny fameperana coronavirus voalohany tamin'ny taon-dasa. Tamin'ny volana Janoary, nanafika polisy ihany koa ireo mpanakorontana ary nandoro ny araben'i Rotterdam taorian'ny nampiharana ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina.
Niverina tany amin'ny faritra andrefan'i Eoropa voalohany tamin'ny vanim-potoana ririnina i Holandy herinandro lasa izay. Ny fameperana, izay misy fiantraikany amin'ny trano fisakafoanana, fivarotana ary fanatanjahan-tena, dia antenaina hitohy mandritra ny telo herinandro farafahakeliny.
The Pays-Bas dia miezaka mifehy ny onjan'ny coronavirus vaovao, izay misy tranga vaovao 21,000 mahery voalaza omaly.
Ny governemanta holandey izao dia mihevitra ny hanilika ireo tsy voavaksiny amin'ny trano fisotroana sy trano fisakafoanana, izay tsy mahazo miditra afa-tsy ho an'ireo izay efa vita vaksiny tanteraka na efa sitrana tamin'ny aretina.